Ukuqala ngaphi ukuqala? | Martech Zone
Ukuqala ngaphi ukuqala?
NgoLwesibini, Februwari 24, 2009 NgoLwesibini, Oktobha 7, 2014 Douglas Karr
Kukho izibonelelo ezintle zokuqalisa inkampani eIndiana. Ubunkokeli boosomashishini yinethiwekhi exineneyo yabantu abathembekileyo nabangqinwayo. Ndithethile nge-Indiana ne-Indianapolis njengeyona ndawo iphambili kwinkampani ukuqala ishishini. Abantu bafundile kwaye basebenza nzima. Izindlu nomhlaba yenye yezona ntengiso zizinzileyo kwilizwe liphela.
Ukuba bendizakuqala ishishini, i-Indianapolis yindawo endifuna ukuba kuyo! Ukuthengisa izindlu nomhlaba akubizi kwaye urhulumente noorhulumente basekhaya bobabini bayishishini.
Ngaba kwanele ukuqala ishishini, nangona kunjalo?
Ukuqala ishishini kufuna inkxaso-mali. Ngaba iIndiana inayo?
The INgxowa-mali yama-21 yeNkulungwane igxile kumashishini oshishino abonakalise ukuthengisa okunokubakho kwezorhwebo lobuchwephesha.
Abanye abagxeki bathi, nangona isoftware kunye netekhnoloji ibonakala ngathi ikhula kakhulu kwezengqesho, itekhnoloji ye-bio itsala eyona nkxaso-mali. Isizathu esinye inokuba kukunxibelelana kwasekhaya apho i-bio-tech inayo kwinkqubo yeYunivesithi. Ndiyathemba ukuba ayisiyiyo le nto- ndiyathemba ukuba le nkxaso-mali iya kwizimvo ngelona thuba libalaseleyo.
Ngaphandle kweNgxowa-mali yamaNkulungwane yama-21, akukho zindlela zininzi unokukhetha kuzo. Inkxaso mali yabucala inenzuzo ngaphezulu kwengxowa mali yeVenture capitalist kuba ihlala iza nentambo encinci eqhotyoshelweyo. Nangona kunjalo, inkxaso-mali yabucala iyaqhubeka nokuntywila koosomashishini bendawo abathe baxhasa ngemali ezinye izinto zokuqala ... Ivakala ngathi wonke umntu uqhubeka nokubuyela kwindawo efanayo.
Ilizwe laseIndiana lineebhiliyoni ezi-2. Umhlobo wabelane nam namhlanje ukuba iOrange County, eCalifornia ineebhiliyoni ezi-8 ezixabisa ngaphezulu kwe-28 yezigidigidi zeedola. Umahluko omkhulu, kwaye ngokuqinisekileyo unefuthe kumandla okuqalisa kwendawo ukufumana inkxaso-mali.
Ke-umbuzo awusoloko ungowona ndawo ifanelekileyo yokuqalisa. Umbuzo unokuba iphi imali yokuxhasa ukuqala kwakho! Kungalixesha lokutyala imali eninzi kwi-21st Century fund ukuba unqwenela ukugcina ishishini liphila apha ekuhlaleni!
Abakhweli bamahashe abane bokuQalisa
Feb 24, 2009 ngo-9: 38 AM
Esinye isixhobo esilungileyo yiNgxowa-mali yoPhuculo oluQalayo kwiPurdue.
Ukuthengisa iMat kwishishini
Feb 24, 2009 ngo-3: 10 PM
Uthe kungcono uDouglas. Yiya apho ikhoyo imali. Kwisiqalo esininzi semali kulapho abatyali mali bakho banokubakho.
Ukuba uqhuba inkampani ye-SaaS, kunokwenzeka ukuba ufumane inkxaso-mali eSilicon Valley, eBoston, eAustin okanye eBoulder.
Ukuba uqhuba ukuqala kwamandla elanga, mhlawumbi iPhoenix iya kuba yindawo elungileyo ukuba ube kuyo.
Nje ukuba unyuke kwaye usebenze kwaye uhlawule abathengi, emva koko kunokuba yimfuneko ukuvula iofisi yendawo apho bakho khona abathengi bakho. Ndicinga ukuba uWal Mart ufuna ukuba ababoneleli babo babe neofisi yengingqi kufutshane nekomkhulu labo.
Mar 1, 2009 ngo-3: 03 AM
I-Indiana ithetha ngomnqweno wayo wokuqala indawo enobuhlobo. Kodwa iintshukumo aziyixhasi le nto. Ingxowa-mali ye-21st Century sisiqwenga esincinci kwaye sisiqalo esihle. Nangona kunjalo, ezinye izixhobo ezinje ngenkxaso mali, ubunkokheli obulawulayo, njl. Ndiyathemba ukuba izinto ziyatshintsha, kodwa iIndiana ibonakala iyindlela egcinakeleyo yokushishina ngeli xesha. Mhlawumbi amavili ahambayo ukutshintsha oku.
Mar 9, 2009 ngo 10:21 PM
Baninzi abantu kwiphondo laseIndiana abanomdla kuqaliso-Solar. Ndizama ukukhulula amaqabane ukuze ndiqalise iimveliso zelanga. UKim koch